Waa Jiif Oo Jaq-Liverpool, Arsenal, Man City & Man United Oo Ka Mid Ah Kooxaha Khasaaraha Ugu Badan Ku Galay Shanta Ciyaartoy Ee Kaydka Lacagta Ugu Badan Ku Helay. - Gool24.Net
Waa Jiif Oo Jaq-Liverpool, Arsenal, Man City & Man United Oo Ka Mid Ah Kooxaha Khasaaraha Ugu Badan Ku Galay Shanta Ciyaartoy Ee Kaydka Lacagta Ugu Badan Ku Helay.
Kooxaha kubbada cagtu waxay u diyaarsan yihiin qaab ay kooxahooda ugu haystaan ciyaartoy lama taabtaan ah oo markasta oo ay taam yihiin la soo safo iyo kuwo loo diyaariyay in ay kaydka ugu jiraan oo lagu baxsado marka ay xaalad dhaawac ama isbadal la doonayo in ciyaarta lagu sameeyo.
Kooxaha Premier League ee waa wayn ayaa haysta ciyaartoy badan oo tayo sare leh laakiin waxaa nasiib daro ku ah in ayna tababarayaashu heli karin fursad ay xidig kastaba ku soo safi karaan kulamada oo dhan.
Haddaba waxaa la shaaciyay shanta ciyaartoy ee xili ciyaareedkan lacagta ugu badan mushaar u qaatay iyaga oo kaydka ku caajisay waxayna saddex ka mid ahi ka tirsan yihiin kooxaha Liverpool, Man United iyo Man City.
Xidiga Man United ee Jaun Mata ayaa noqday kan lacagta ugu badan ku qaatay fadhiga kursiga kaydka ee kooxdiisa United wuxuuna u xaadiray 5.3 milyan gini oo aanu kubbad ku taaban waana ciyaartoyga lacagta ugu badan ku sameeyay kursiga kaydka xili ciyaareedkan ee horyaalka Premier league.
Difaaca midig ee kooxda Manchester City ee João Cancelo ayaa noqday xidiga labaad ee xili ciyaareedkan lacagta labaad ee ugu badan ku helay kursiga kaydka horyaalka Premier League wuxuuna qaatay mushaar dhan 4.3 milyan gini oo aanu wax shaqo ah ugu qaban kooxdiisa City.
Adam Lallana oo ku jira maalmihii ugu danbeeyay waayihiisa ciyaareed ee Liverpool ayaa noqday xidiga saddexaad ee xili ciyaareedkan lacagta ugu badan ku soo shaqaystay kursiga kaydka wuxuuna Reds ka qaatay mushaar dhan 3.4 milyan gini oo aanu ku shaqayn kadib markii uu kooxda Klopp fursad ka waayay.
Ciyaartoyga afraad ee kursiga kaydka oo uu fadhiyay mushaarka ugu badan xili ciyaareedkan kaga helay kooxaha Premier league waxa uu noqday xidiga kooxda Everton ee Bernard kaas oo kaydka ku helay mushaar dhan 3.2 milyan gini.
Waxaa liiska shanta ciyaartoy ee mushaarka ugu badan kursiga kadyka ku helay dhamaystiray Mesut Ozil marka kulamadii uu ciyaaray mushaarkooda laga reebay haddana Gunners kursiga kaydka kaga qaatay 3.1 milyan gini.
Halkan kaga bogo liiska shanta ciyaartoy iyo lacagaha ay fadhiga ugu shaqaysteen.
Dhamaan shantan ciyaratoy ayaa kooxahooda ka bixi kara suuqa kala iibsiga ciyaartoyda xagaagan inkasta oo ay haddaba hubaal tahay in Adam Lallana uu dhawaan si xor ah kaga dhaqaaqayo Anfield.